Jawaani Jaaneman (2020) | MM Movie Store
ဟိုငျး အခြောလေးတို့ အိမျထဲမှာ နနေဲ့ ကမ်ဘာကွီးကို ကယျတငျနိုငျပွီဆိုတာ သိပွီးကွရောပေါ့။မပငျြးရအောငျ အကြိုးဆောငျပေးရရငျ ရုပျရှငျကားကောငျးလေးတှနေဲ့ တငျဆကျပေးမှာပါ။ခုတဈဖနျ တငျဆကျမှာကတော့… ဘောလိဝုဒျ မိသားစုဒရာမာကို ဟာသလေးတှနေဲ့ ကွညျ့ရှုရမှာပါ။
မငျးသားကွီးကလညျး လူတိုငျးသိပွီးသား ဖွဈပွီး မငျးသမီးခြောလေးတှလေညျး ပါနပေါသေးတယျနျော။ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့… ဟိုးရှေးရှေးတုနျးက စျောကွညျဘဲ တဈယောကျ ရှိသတဲ့ပေါ့။
ခုခတျေအချေါ စားဘဲကွီးပေါ့။ စားဘဲကွီးဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကလညျး လှယျလှယျရရိုးလား။မနကျဆို ၁၂နာရီမှ အိပျယာထ၊ ရုံးကို ၃နာရီလာ၊ ညနေ ၅နာရီရုံးဆငျး၊ ညဘကျဆို ကလပျတကျ၊ စျောတှနေဲ့ ဇာတျလမျးဖွဈ။သူ့အလုပျကတော့ အိမျခွံမွအေကြိူးဆောငျ ပှဲစားပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ သူ့အရှယျက အိမျထောငျပွုသငျ့နပွေီလို့ မိသားစုက ဖြောငျးဖကြွတယျ။လောကမှာ ဘာအကွောကျဆုံးလဲလို့ မေးရငျ မိနျးမယူ၊ ကလေးမှေးပဲ။ သူ့ခံယူခကျြက ရှိသေးတယျ။ ဘာတဲ့။အိမျထောငျဘဝဆိုတာ ယောကျြားတှကေို ကရြှုံးစတေဲ့ အရာတဲ့ဗြ။စျောတှကေို ထညျလဲတှဲနတေဲ့ ဘဲကွီးကတော့ မိနျးမယူစရာမှ မလိုတာ။
တနတေ့ော့ မိနျးကလေးခြောခြောလေးတဈယောကျကို ဘားမှာတှတေ့ော့ ထုံးစံအတိုငျး ဘဲကွီးက သှားရညျယိုတာပေါ့။ကောငျမလေးက ပွောရှာတယျ။ သူနဲ့ စကားပွောခငျြလို့တဲ့။အဲ့ဒီမှာ စျောတှတေို့ငျး ချေါနကေသြူ့အိမျကို ချေါသှားတော့… ကောငျမလေးက စကားတဈခှနျးဆိုပါတယျ။
အဲ့ဒါကတော့…. လူပြိုကွီး ကွကျသီးမှေးညှငျးထစရာ အကွောငျးတဈခုဖွဈပွီး……… ကဲ ကိုယျတိုငျသာ ခံစားကွညျ့ပါတော့ဗြာ။
ဟိုင်း အချောလေးတို့ အိမ်ထဲမှာ နေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်နိုင်ပြီဆိုတာ သိပြီးကြရောပေါ့။မပျင်းရအောင် အကျိုးဆောင်ပေးရရင် ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတွေနဲ့ တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ခုတစ်ဖန် တင်ဆက်မှာကတော့… ဘောလိဝုဒ် မိသားစုဒရာမာကို ဟာသလေးတွေနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပါ။
မင်းသားကြီးကလည်း လူတိုင်းသိပြီးသား ဖြစ်ပြီး မင်းသမီးချောလေးတွေလည်း ပါနေပါသေးတယ်နော်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့… ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက စော်ကြည်ဘဲ တစ်ယောက် ရှိသတဲ့ပေါ့။
ခုခေတ်အခေါ် စားဘဲကြီးပေါ့။ စားဘဲကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကလည်း လွယ်လွယ်ရရိုးလား။မနက်ဆို ၁၂နာရီမှ အိပ်ယာထ၊ ရုံးကို ၃နာရီလာ၊ ညနေ ၅နာရီရုံးဆင်း၊ ညဘက်ဆို ကလပ်တက်၊ စော်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်။သူ့အလုပ်ကတော့ အိမ်ခြံမြေအကျိူးဆောင် ပွဲစားပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ သူ့အရွယ်က အိမ်ထောင်ပြုသင့်နေပြီလို့ မိသားစုက ဖျောင်းဖျကြတယ်။လောကမှာ ဘာအကြောက်ဆုံးလဲလို့ မေးရင် မိန်းမယူ၊ ကလေးမွေးပဲ။ သူ့ခံယူချက်က ရှိသေးတယ်။ ဘာတဲ့။အိမ်ထောင်ဘဝဆိုတာ ယောက်ျားတွေကို ကျရှုံးစေတဲ့ အရာတဲ့ဗျ။စော်တွေကို ထည်လဲတွဲနေတဲ့ ဘဲကြီးကတော့ မိန်းမယူစရာမှ မလိုတာ။
တနေ့တော့ မိန်းကလေးချောချောလေးတစ်ယောက်ကို ဘားမှာတွေ့တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဘဲကြီးက သွားရည်ယိုတာပေါ့။ကောင်မလေးက ပြောရှာတယ်။ သူနဲ့ စကားပြောချင်လို့တဲ့။အဲ့ဒီမှာ စော်တွေ့တိုင်း ခေါ်နေကျသူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားတော့… ကောင်မလေးက စကားတစ်ခွန်းဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့…. လူပျိုကြီး ကြက်သီးမွှေးညှင်းထစရာ အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး……… ကဲ ကိုယ်တိုင်သာ ခံစားကြည့်ပါတော့ဗျာ။